ग्याजेट्स Archives - Page 13 of 13 - Technology Khabar
» ग्याजेट्स » Page 13
काठमाडौं, १४ भदौ । एलजीले नयाँ स्मार्टवाच सार्वजनिक गरेको छ । कोरियाली कम्पनी एलजीले २३ क्यारेट गोल्डजडित स्मार्टवाच सार्वजनिक गरेको हो । कम्पनीले सोमबार स्पेशल एडिशनअन्तरगतको एन्ड्रोयड अपरेटिंग सिस्टममा आधारीत […]
काठमाडौ, १० भदौ । एलजीले स्मार्टफोन प्रयोगकर्ताको समस्यालाई ध्यानमा राखेर फुल साइजको कीबोर्ड ल्याएको छ । कम्पनीले स्मार्टफोनमा टाइप गर्ने समस्याको समाधान गर्न तथा सहजरुपमा टाइप गर्नका लागि पकेटमा नै […]
काठमाडौं, ५ साउन । माइक्रोम्याक्सको सब्सिडरी कम्पनी यू (Yu) को पहिलो फिटनेस ब्याण्ड यूफिट (Yu Fit) छिटै भारतीय बजारमा उपलब्ध हुने भएको छ । कम्पनीले ल्याएको यो पहिलो ब्याण्ड यहि […]
काठमाडौं, २७ असार । इन्टरनेशनल विजनेश मशिन्स कर्पोरेशन (आईबीएम)ले अहिले बजारमा भएका भन्दा निकै सानो कम्प्यूटर चीप (Computer Chip) उत्पादन गरेको छ । आईबीएमले अहिले बजारमा भएका भन्दा निकै सानो […]
काठमाडौं, २३ असार । अहिलेको मौसम भनेको वर्षा अर्थात मनसुनको मौसम हो । यो मौसममा कुन बेला र कतिखेर कहाँ रहँदा पानी पर्दछ भन्ने कुनै जानकारी नहुनसक्दछ । वर्षाको मौसम […]
काठमाडौं, १६ असार । अहिले अधिकांश व्यक्तिहरुले स्मार्टफोन प्रयोग गर्ने वा किन्ने चाहना गर्दछन् । हाल विश्व बजारमा विभिन्न श्रेणीका स्मार्टफोनहरु उपलब्ध रहेका छन जसमा डाटा स्टोरेज गर्नका लागि माइक्रो […]
प्रयोगकर्ताको रकम र कार्डको सुरक्षा गर्ने ‘स्मार्ट वालेट’ !
काठमाडौं, २४ जेठ । पछिल्लो समय स्मार्ट प्रविधिको विकास द्रूत गतिमा भईरहेको छ भने विभिन्न स्मार्ट डिभाइसहरुको आविश्कार दिनप्रतिदिन भईरहेको छ । विश्वमा विभिन्न कम्पनीहरुले हरेक वर्ष नयाँ प्रविधिका डिभाइसहरु […]
शियोमीले ल्यायो नयाँ प्रविधिसहितको नाइट भिजन क्यामरा
काठमाडौं, २४ जेठ । चीनियाँ स्मार्टफोन कम्पनी शिओमीले नयाँ प्रोडक्ट लन्च गरेको छ । शिओमीले चीनमा वाईआई (Yi) क्यामरा नाइट भिजन एडिशन लन्च गरेको छ । कम्पनीले शुक्रबार चीनमा लन्च […]
काठमाडौं, २१ जेठ । एनसेलले भूकम्पपछिको राहत तथा पुनर्निर्माण कार्यलाई सघाउन द्रूत गतिको इण्टरनेट सेवा प्रदान गर्ने वायरलेस राउटर तथा डोङ्गल बजारमा ल्याएको छ । यस्ता डिभाइसमार्फत ५ सय एमबी […]
काठमाडौं, ४ वैशाख । विश्वको सबैभन्दा मूल्यवान कम्पनी एप्पलले गएको सेप्टेम्बरमा आईफोन सिक्स तथा सिक्स प्लस सार्वजनिक गरेदेखि टेक कम्पनीको शीर्ष स्थानमा रहन सफल भएको छ तर कम्पनीले हालै सार्वजनिक […]
काठमाडौं, २६ फागुन । अमेरिकी टेक्नोलोजि कम्पनी एप्पलले सोमबार आफ्नो नयाँ घडी सार्वजनिक गरेको छ । यो स्मार्टवाच आफैंमा एक स्मार्टफोन जस्तो रहेको छ । यो स्मार्टवाच डिजिटल टच नामक […]
काठमाडौं, ३० पुस । एप्पलले अब आफ्नो लोकप्रिय ग्याजेट बन्द गर्न लागेको छ । रिपोर्टका अनुसार कम्पनीले आइपड शफल (Ipod Shuffle) यो वर्ष बन्द गर्न लागेको हो । कम्पनीले यसपछि […]
काठमाडौं, ९ मंसिर । अब मोबाइल चार्ज गर्न समय लाग्यो भनेर चिन्ता गर्ने समस्याको समाधान हुने भएको छ । अनुसन्धानकर्ताहरुले द्रूत गतिमा विकास हुँदै गरेको स्मार्टफोन प्रविधिको विविध आयामहरुको अनुसन्धान […]
काठमाडौं, ७ मंसिर । यदि तपाईले आफ्नो मोबाइल फोन कतै राखेर विर्सनु भएको छ वा कसैले तपाईँको फोन लुकाएर दुख दिइरहेको छ । अथवा कतै रेष्टुरेन्टमा जाँदा छोड्नु त भएन […]
काठमाडौं, ७ मंसिर । स्मार्टफोन ग्लास स्क्रीनको टप निर्माता कम्पनी कार्निग इनकर्पोरेटेडले निकै दह्रो ग्लास कवरको नयाँ रेन्ज गोरिल्ला ग्लास-४ (Gorilla Glas-4) सार्वजनिक गरेको छ । कम्पनीले यो ग्लास स्क्रीन […]
काठमाडौं, २३ कात्तिक । एप्पललाई पनि निर्यात गर्दै आएको जापानी डिस्प्ले निर्माता कम्पनी सार्पले आगामी मार्चसम्मको आर्थिक वर्षमा चिनियाँ स्मार्टफोन निर्मातालाई गरिने स्क्रिनको निर्यात लक्ष्यभन्दा बढी हुने जनाएको छ । […]
काठमाडौं, २१ कार्तिक । स्मार्टफोन तथा ग्याजेट्स बनाउने चीनियाँ कम्पनी जिओमीले उच्च क्षमताको नयाँ पावर ब्यांक ल्याएको छ । कम्पनीले १६,००० एमएएच एमअाइ पावर ब्यांक लन्च गरेको छ जुन यसअघि […]
काठमाडौं, २७ असोज । के तपाईँ स्मार्टफोन प्रयोगकर्ता हुनुहुन्छ र छिटै ब्याट्रि सकिने समस्याबाट हैरान हुनुहुन्छ ? स्मार्टफोन चलाउनेहरुको लागि मुख्य समस्या भनेको यसको ब्याट्रि छिटो सकिनु हो । स्मार्टफोनभित्रै […]
काठमाडौं, ८ असोज ।सामसुङ मोबाइलको नेपालका लागि आधिकारिक वितरक आइएमएसले आकर्षक एसेसरिज- ल्यान युएसबी हब र एस एक्शन माउस बजारमा ल्याएको छ । ल्यान युएसबी हबले ग्राहकलाई नोट प्रो१२.२ तथा […]
काठमाडौं, १२ भदौ । सामसुङले विश्वको सबैभन्दा पातलो स्मार्टक्यामेरा NX भारतमा सार्वजनिक गरेको छ । यो स्लिम क्यामेराको विशेषता यो हो की यसको लेंस परिवर्तन गर्न सकिन्छ । क्यामेरामा २० […]
काठमाडाैं, १७ साउन । (एजेन्सी)। हरेकदिन एउटा ब्यक्तिले कति ग्याजेट्स प्रयोग गर्न सक्छ, अनुमान लगाउनुहोस त? अनुमान गर्नुभयो होला बढीमा आठ, दशवटा। तर अचम्मको कुरा के हो भने एक ४५ […]